Iflegi yeSizwe yeLapel Pin Pin Badge Setha iTrophy Trophy Die iMedali yeGolide yokuDumisa
Ubungakanani: malunga ne7cm
Ngasemva: isanti-blast + 1 post posting
I-Acc.: Iklubhathane iklatshi / iklatshi yerabha
Packaging: Ibhegi enkulu / ibhokisi yesipho / ikhadi elixhasayo
Inkqubo yobugcisa: ukubumba, ukufa, ukuphola, ukugoba, ukufaka imibala, i-QC, indibano, ukupakisha.
Umsebenzi wobugcisa: i-enamel ethambileyo, iseti yamacala amabini
1. Isiko Pin Ibhejis: ipini yoqweqwe lwawo olukhuni, ikhonkolo ye-enamel ethambileyo, i-enamel ethambileyo, ipini ye-glitter enamel, ukukhanya kwipini emnyama, njl.
Umbala we-enamel othambileyo ungaphantsi kwemigca yesinyithi ejikelezileyo, umphezulu unemvakalelo eyomeleleyo yokuthinta.
Iipinki ze-enamel ezithambileyo zinokufakwa nawuphi na umbala wesinyithi okanye zidaywe ngemibala yePantone.
Ukutyabeka kunye nokufa kwenziwa ngaphambi kokongeza imibala yoqweqwe lwawo.
I-enamel ethambileyo ifikeleleke kwaye ifanelekile kwiibheji ezininzi, iingqekembe, iimedali, ii-keychains, iithegi, ii-cufflinks kunye nezinye iimveliso zesinyithi.
Ukuncamathela kumbono "Wokwenza iimpahla ezikumgangatho ophezulu kunye nokwenza abahlobo abalungileyo nabantu namhlanje abavela kwihlabathi liphela", sihlala sibeka umdla wabathengi ukuba baqale ngokuThengisa nge-China e-China ephezulu yeBass kunye neGolide yeSikhumbuzo soMkhosi. kuthetha ukuba nzima ukwenza umsebenzi, sihlala siphambili kwiimveliso zetekhnoloji ecocekileyo. Sibe liqabane elinobuhlobo onokuthembela kulo. Nxibelelana nathi namhlanje ngeenkcukacha ezithe kratya!
Ukubonelela nge-China China iMedallion kunye neNtlonipho yeMallallion ngexabiso, Imveliso yethu esemgangathweni yenye yezona zinto zixhalabisayo kwaye ivelisiwe ukufezekisa imigangatho yabathengi. "Iinkonzo zabaThengi kunye nobudlelwane" yenye indawo ebalulekileyo esiqonda ngayo ukuba unxibelelwano olufanelekileyo kunye nobudlelwane kunye nabathengi bethu lelona gunya libalulekileyo lokuliqhuba njengeshishini lexesha elide.
Umsebenzi wethu kufuneka ube kukujika sibe ngumthengisi ovelisa izixhobo zobuchwephesha obuphezulu kunye nezixhobo zonxibelelwano ngokunika ulwakhiwo lwamaxabiso, imveliso ekumgangatho wehlabathi, kunye namandla enkonzo kwiminyaka esi-8 yokuThumela ngaphandle China Ubugcisa bobugcisa begolide obuCwangcisiweyo beCrystal Trophy Music Dance Plastic / Wood Ii-Trophies zeSiseko, besizimisele ukukunika elona xabiso liphantsi lokuthengisa ngexesha lentengiso, olona mgangatho uphakamileyo kunye nenkonzo entle yokuthengisa.Siyakwamkela ukwenza iibhasi kunye nathi, masiphumelele kabini.
Iminyaka eli-8 yokuThumela ngaphandle eTshayina iTrophy kunye nexabiso leMidlalo yeTrophy, Ngaphezulu kweminyaka eli-9 yamava kunye neqela elinobuchule, ngoku sithumele izinto zethu kumazwe amaninzi nakwimimandla kwihlabathi liphela. Siyabamkela abathengi, imibutho yamashishini kunye nabahlobo abavela kuzo zonke iindawo zehlabathi ukuba banxibelelane nathi kwaye bafune intsebenziswano ngezibonelelo ezifanayo.
Egqithileyo Iziqwenga ezibini eziDityanisiweyo zoyilo zeGolide eziXutywe ngeLapel Pin Marathon yeMedal Set Set
Okulandelayo: Iimbasa zeBhola yeBhola ekhatywayo yesiqhelo
Izikhonkwane ze-Enamel zesiko
Izikhonkwane zesiko lesiqhelo
Iphedi yoqweqwe lwawo
Uyilo Custom zinc ingxubevange wenza nickel nesingxobo ke ...
Bezinto wayesebenzisa Pin Design Custom Aluminium Made ...
Kwenziwe ngentando pin Abavelisi Custom Made HK Global ...
Iziqwenga ezibini ezidityanisiweyo zoyilo zeGolide ezifakwe kwiLapel Pi ...
Uyilo Custom Factory Made Running Badge Gold P ...
Custom Ukwenza Izikhonkwane wayesebenzisa Zinc ingxubevange Die Castin ...